रोल्पाका एक २२ वर्षीय युवाले आफ्नै छातीमा गोली हानेर आत्महत्या ! « Postpati – News For All
रोल्पाका एक २२ वर्षीय युवाले आफ्नै छातीमा गोली हानेर आत्महत्या !
माघ २४, रोल्पा । भरुवा बन्दुक आफैमाथि चलाएर रोल्पामा एक युवकले आत्महत्या गरेका छन्। जिल्लाको दक्षिणी भेगको रुन्टिगढी गाउँपालिका-९ धाराटोलका २२ वर्षीय मिशन बुढाले आफैमाथि बन्दुक चलाएका हुन‍्, खेम बुढाले आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार लेखेका छन् ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीले जनाएको छ। घरमै राखिएको बन्दुक पनि अवैध रहेको अनुमान छ। खेती किसान गर्ने मिशनमा छारे रोग रहेको पारिवारले जनाएको छ। ६ भाइ मध्ये मिशन माइला हुन् । दाईभाईसँग उनीहरु छुट्टीएर बसेका थिए।